We wish youablessed and prosperous Myanmar New Year !
We wish youablessed and prosperous Myanmar New Year ! "မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသော နှစ်သစ်သင်္ကြန်အခါတွင် ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်"🙏🙏🙏
" အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည့် Covid-19 ရောဂါကုသဆေး (သောက်ဆေး) ဖြစ်သည့် MOLNUPUAC 200 (Molnupiravir 200mg) အပြင် MOLNUPAC 400 (Molnupiravir 400mg )အား မှာယူရရှိနိုင်ပါပြီ "
COVID19 , Molnupac , Molnupiravir
ကျွန်ုပ်တို့၏ အနောက်တိုင်းဆေးဝါးစက်ရုံ Pacific Medical Industries Ltd မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလျက်ရှိသော အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသော FDA ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည့် Covid-19 ရောဂါကုသဆေး(သောက်ဆေး)ဖြစ်သည့် MOLNUPAC 200 (Molnupiravir 200mg ) အပြင် MOLNUPAC 400 (Molnupiravir 400mg) အား ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန Myanmar FDA မှ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ထောက်ခံချက် စာအမှတ် - 2302ND004 ဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
MOLNUPAC 200 (Molnupiravir 200mg) အား မြန်မာပြည်နိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံသားပိုင် Pacific Medical Industries Ltd ဆေးဝါးစက်ရုံမှ မှ branded generic “MOLNUPAC 200”အမည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခြင်းသတင်းကောင်း
Covid Treatment , Molnupac
"Covid-19 ရောဂါအတွက် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကုသဆေး(သောက်ဆေး)အဖြစ် UK MHRA မှခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ US FDA မှ Emergency Use Authorization (EUA )အဖြစ် ခွင့်ပြုချက်ရထားသည့် Molnupiravir အား မြန်မာပြည်နိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံသားပိုင် Pacific Medical Industries Ltd ဆေးဝါးစက်ရုံမှ မှ branded generic MOLNUPAC အမည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက် နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဌာန Myanmar FDAမှ ထောက်ခံစာအမှတ်( 2302ND002) ဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီး စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် စတင်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း "
Wishing youaHappy Thadingyut Festival
" ပျော်ရွှင်စရာ သီတင်းကျွတ်အချိန်အခါ သမယမှာစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ Pacific-AA Group, AA Medical Products Ltd မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ် "
Pacific Medical Industries Ltd (PMI) has produced these tablets for COVID-19 patients with mild to moderate symptoms. This marks the first ever Myanmar FDA-approved, drug, manufactured in Myanmar for Covid 19.
FAVIPAC (Favipiravir 200mg) ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းကောင်း
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ Pacific Medical Industries Ltd (PMI) အနောက်တိုင်းဆေးဝါးစက်ရုံ၏ Antiviral generic medicine FAVIPAC (Favipiravir 200mg) tablet (20 tablets/box ) အား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ယခုအခါ AA Medical Products Ltd မှ လိုအပ်သော ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ Covid ကုသရေး center၊ ဆရာဝန်ကြီးများထံသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိစေရန် နှင့် ဆေးဝါးပြတ်လတ်မှုမရှိစေရန် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လူနာများအတွက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျှက်ရှိပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Participation asaDeluxe Exhibition Booth in 67th Myanmar Medical Conference
MMA , 67th Myanmar Medical Conference , Deluxe Exhibition Booth , Virtual Conference
67th Myanmar Medical Conference, organized by Myanmar Medical Association, will be held from 23th to 25th of January 2021. Due to Covid-19 Pandemic, 67th Myanmar Medical Conference will be held asaVirtual Conference, and AA Medical Products Ltd will be participated asaDeluxe Exhibition Booth.
2020 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence (ACE) Recognition Award
Pacific-AA Group , AMCHAM , Pacific Alpine Myanmar
Pacific-AA group is honoured to receive the prestigious AMCHAM CSR Excellence (ACE) Award asa4th time which reaffirms our group’s commitment to the nation’s sustainable economy & community.
Happy Thadingyut Festival 2020
"မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသော ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ် အခါသမယလေးဖြစ်ပါစေ"
Announcement for Reopening of the Group A office of AA Medical's Branch (Located at 26th and 82nd Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
announcement , Covid-19